नेपाल आज | जेल मुक्त भएपछी के गर्दैछन पूर्व डिआइजी रञ्जन?
आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा जेल सजाय पाएका पूर्व डिआइजी रन्जन कोइराला बिहीबार दिल्लीबजार जेलबाट रिहा भए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायधिश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कोइरालाको जेल अवधि घटाएर उनलाई रिहा गरे । सबै प्रमाणहरू नष्ट गर्न कोइरालाले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरे र उनको लास जलाइदिएका थिए । स्थानीयले पछि गीताको मृत शरीर फेला पारेका थिए। पालुङमा दुईपटक घटनास्थल अवलोकन गर्ने क्रममा कोइरालालाई देखेपछि स्थानीयले कोइरालालाई नियन्त्रणमा लिएका थिए । उनलाई सर्वोच्चको आदेशमा रिहाइ गरेपछि अहिले उनी के गर्दैछन् भन्ने कुरा चर्चा र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । आखिर के गर्दैछन् त रंजन ? हामीले खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
प्रेमिका र दुई छोराहरुसँग समय बिताउँदैः
जेलबाट रिहा हुँदा उनकी प्रेमिका तारा रेग्मी उनलाई लिन भनी गएकी थिईन् । तर आफूले धेरै माया गर्ने भनिएका दुई छोराहरु भने उनलाई लिन गएनन्, जसका कारण बाबु र छोराहरुबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको शङ्का गरिएको थियो । तर जेठो छोरा आयुष कोइरालाले भने पूर्णरुपमा बुबा निर्दोष भएको टिप्पणी सार्वजनिक रुपमै गरेका छन् । बाबुछोराबीच कुनै पनि नकरात्मक सम्बन्ध नभएकको र अब आमा तारा रेग्मी, बुबा, भाई, हजुरआमा र उनीसहित ५ जनाको परिवारमा अब खुशी भई सँगै बस्ने आयुष कोइरालाले बताएका छन् ।
समाजिक सन्जालमा आएको प्रतिक्रियाले तनावग्रस्तः
घटना हुँदा सानै उमेरका दुई दाजुभाई निकै पिडित भएको आयुषले सार्वजनिक रुपमै बताएका छन् । ९ कक्षामा पढिरहेका आयुष त्यतिबेला अपहेलनाका कारण आफ्नो विद्यालय समेत जान नसकेको र बुबा जेलमा हुँदाको पीडा अहिले कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुने उनले बताएका छन् । विद्यालयदेखि कलेज पुग्दा सम्म पनि सबैको हेपाई दुबै भाईले सहनुपरेको कोइरालाले बताए । अभिभावकविहीनताको अवस्था के हो भनेर भोगेको र अब भने बाबालाई छाडेर कहीँ नजाने उनले बताएका चाहन ।
हल्का मदिरा र मस्तीः
रञ्जन बेलाबेलामा हल्का मदिरा सेवन गर्ने गर्थे । छोरा आयुषका अनुसार रञ्जनमा अत्याधिक मदिरा सेवन गर्ने लत नभएको तर बेलाबेलामा हल्का मदिरा सेवन गरेर मस्ती गर्ने गरेका छन् । उनी कहिलेकाही साथीहरुलाई जम्मा गरेर पनि मदिरा सेवन गर्ने गर्दथे ।
लामो समयपछि परिवार एकैठाउँमा हुन्दा खुसी तर सामाजिक अपहेलाना र नकारात्मक प्रतिक्रियाले पुरै परिवार तनावमा रहेकाले उनी मदिरा र मस्तीमा समेत लागेका छन् । बुबाको रिहा भइसकेपछि सब परिवार सँगसँगै बस्न पाएको खुशी एकतर्फ र अझैपनि सोही विषयमा अपहेलना सहिरहनु परेको दुःख एकतर्फ रहेको आयुषले बताएका छन् । बुबा निर्दोष भएका कारण अब जति नकरात्मक प्रतिक्रिया आएपनि उनीहरु सधै खुशी रहने उनले बताएका छन् ।
स्वास्नीमारा रन्जनलाई कौडा खेल्ने न्यायाधिस साथीले जेलबाट छुटाउन प्रयोग गरेको कानुनको बुँदामा के छ ?
अनलाइन कक्षा चलाउन नसकेपछि प्रभावकारी वन्दै टोल शिक्षा